African Tourism Board promotes joint tourism promotion | Travel Destination Update
Ikhaya » Iindawo ekuyiwa kuzo » IBhodi yoKhenketho yase-Afrika ikhuthaza ukukhuthazwa ngokudibeneyo kokhenketho
IBhodi yoKhenketho yase-Afrika ikhuthaza ukukhuthazwa ngokudibeneyo kokhenketho
Matshi 6, 2020
Sijonge ukukhuthaza iAfrika njengendawo yabakhenkethi ekhethiweyo kwihlabathi, i IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB) isebenza ngokubambisana noMzantsi Afrika, iTanzania neNigeria ukukhuthaza, ukuthengisa kunye nokuphuhlisa ukhenketho kwezi ndawo zabakhenkethi baseAfrika.
Ummeli weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika eNigeria, u-Abigail Olagbaye, wayedibene naye emva koko wabamba iingxoxo nabakhomishinari abaphezulu kunye noonozakuzaku ENigeria naseTanzania Kwiphulo elikhethekileyo lokukhuthaza ukhenketho phakathi kweNigeria eNtshona Afrika naseTanzania eMpuma Afrika.
Kunye noSihlalo we-ATB, Mnu. Cuthbert Ncube, UNks Abigail undwendwele kwaye emva koko watshintshiselana ngezimvo noMkomishinala oPhezulu wase-Nigeria e-Tanzania, uGqirha Sahabi Isa Gada, kunye namagosa aphezulu noonozakuzaku kwiKhomishini ePhakamileyo yoMzantsi Afrika eTanzania.
Abaphathi ababini be-ATB babambe iingxoxo ezisekwe kuphuhliso lwezokhenketho phakathi koMzantsi Afrika, iTanzania, iNigeria, kunye ne-Afrika iphela.
Bobabini uSihlalo we-ATB kunye noMmeli weBhodi eNigeria babeseTanzania kwinyanga ephelileyo kukhenketho olusebenzayo oluye lwatsala iGosa eliyiNtloko le-ATB (i-CEO) uDoris Woerfel.
NgoLwesibini wale veki, uNkosazana Abigail wenze utyelelo lokubonisana kwiKomishini ePhakamileyo yaseTanzania eNigeria kunye nengxoxo ekwinqanaba eliphezulu noGqirha Benson Bana, uMkomishinala Omkhulu waseTanzania eNigeria, kunye noMnu Elias Nwandobo, kunye Umcebisi kuMishini.
Ummeli we-ATB eNigeria uxoxe nabameli baseTanzania malunga nokukhuthaza kunye nokwenza lula iimveliso zokhenketho eNigeria naseTanzania.
Inxalenye yezindululo ezibekiweyo yayiyiveki ecwangcisiweyo yaseTanzania naseNigeria yeVeki yoKhenketho yowama-2020. La mazwe mabini aseAfrika adume ngezilwanyana zasendle, iinkcubeko ezityebileyo zaseAfrika, kunye nomtsalane wabakhenkethi wembali.
I-Tanzania idume ngokuba ne-safaris yezilwanyana zasendle, iNtaba i-Kilimanjaro, kunye namanxweme ashushu e-Indian Ocean e-Zanzibar. INigeria lelona lizwe likhulu e-Afrika, izityebi ezineenkcubeko ezahlukeneyo kunye nembali. INigeria ikwalilizwe eliphambili e-Afrika, etyebile ngamasiko ase-Afrika, ubukhulu becala uncwadi lwase-Afrika oluthe lwathengiswa leli lizwekazi eYurophu nakuMntla Melika, lutsala abafundi abaninzi ukuba bandwendwele eli lizwe lase-Afrika kwindibano zemfundo.
Iveki yokuHamba eTanzania naseNigeria yokuhamba kulindeleke ukuba itsale abasebenza kubakhenkethi, abahamba ngezokhenketho kunye nabasebenza kwezokhenketho, iinqwelomoya, iihotele, abathathi-nxaxheba, abathengi, imithombo yeendaba, kunye nabakhenkethi, phakathi kwabanye abathathi-nxaxheba kwezorhwebo.
"IKhomishini ePhakamileyo yaseTanzania eNigeria kunye neBhodi yezoKhenketho yase-Afrika ijonge phambili kwizabelo zobu buhlakani bokuvelisa kunye neziphumo ezilungileyo ezibonisa amazwe kunye ne-Afrika iphela," UNks Abigail wacatshulwe kumyalezo wakhe ophuma ku-eTN.
Ukusekwa ngombono wokudibanisa ukudibanisa i-Afrika njengendawo enye, i-ATB ijonge ukubona abantu abavela eNigeria nase Mzantsi Afrika betyelela eTanzania ngokutshintshiselana nabakhenkethi baseTanzania, ikwangabemi abavela kula mazwe aseAfrika batyelele amanye amazwe aseAfrika.
IBhodi yezoKhenketho yase-Afrika ngumbutho owaziwa kwilizwe liphela ngokusebenza njengesixhobo sophuhliso loxanduva kwezokhenketho ukuya, ukusuka, nakwingingqi ye-Afrika. Ngolwazi oluthe kratya kunye nendlela yokujoyina, ndwendwela zintsiweb.com .